PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - Umlingisi wesibaya ujoyine elepsl
Umlingisi wesibaya ujoyine elepsl
Abadlali babuye bahleke kusetshenzwa
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Front Page - MFANAFUTHI NDLOVU
UJOYINE ikilabhu yepremier Soccer League (PSL) u-andile Mxakaza, oyisilomo somlingisi wesibaya lapho edlala khona indawo kafezile kulo mdlalo oshisa izikhotha kwimzansi Magic.
ILANGA Langesonto lithole ukuthi umxakaza usezoncelisa amawele njengoba eseqashwe nayiRoyal Eagles egijima kwinational First Division (NFD) ukugcina abadlali bayo beqatha. Lo mlingisi uqale kule nyanga ukusiza abadlali bale kilabhu elolongwa nguroger Sikhakhane.
Ekhuluma naleli phephandaba, umxakaza engxoxweni ekhethekile, uvumile ukuthi useyingxenye yale kilabhu ephethwe wumndeni weziqumama zakwampisane. Uthe uzizwa ethobekile ngokuzitholela umsebenzi wokulolonga abadlali kwazise ukhule edlala ibhola ngakubo enewtown C, enanda.
Uthe washiya unobhutshuzwayo emuva kokulimala idolo wabe esegxila ekuzivocavoceni nasekulingiseni. Ubalwa nabesilisa abanemizimba ethandwa kakhulu nga- besifazane ngenxa yokulolongeka kahle.
“Okuhle kakhulu wukuthi uma uzimisele ngento kumele ukhombise ukuyilambela ukuze uyizuze. Ngibe nenhlanhla enkulu yokuthi abesibaya bangivumele ukwenza omunye umsebenzi. Banginike imvume njengoba kungeke kushayisane nesikhathi sokuqopha. Ngisakhula bengisebenza evirgin Active, eworkshop, (ethekwini) ngenza umsebenzi ofanayo.
“Kimina kufana nokuqhuba umsebenzi. Ngibonga kakhulu emndenini wakwampisane ngokunginika ithuba lokusiza abadlali bekilabhu. Ngisebenza kakhulu nabaqeqeshi nabadlali yize inkinga iyaye ibe sekutheni abanye babo bamane bacabange ukuthi kuyadlalwa ngenxa yendawo engiyidlala kwisibaya.
“Ngaso sonke isikhathi kuyaye kubekhona isikhathi sokuhleka ngoba bajwayele ukusebenzisa umugqa engiwusebenzisa kwisibaya othi: “Asambeni Madoda!” bese kuvele kuqhume uhleko ejimini.
"Bengikhona ngeledlule ukuyobabuka abafana bedlala ngokuli-
ngana nerichards Bay FC kuba ngu-1-1 emhlathuze Sports Complex,” kusho umxakaza. ANDILE Mxakaza